Archive du 20191204
Afo be teny Behoririka Nirehitra ny Galerie Mialy
May kila forehitra ny ampahany amin’ny tranombarotra goavana Galerie Mialy etsy Behoririka ampitan’ny mpaninjara solika Shell omaly hariva.
Antoko Teza « Mila mailo, amin’ny frantsay isika ! »
Mila mailo, mailo, mailo amin’ny frantsay isika malagasy, hoy ny antoko politika Teza, mikasika ny fomba hitakiana ireo nosy malagasy na Iles éparses.
Rina Randriamasinoro Mitaky fampitahana lisi-pifidianana
Araka ny porofo be dia be izay voaray eto am-pelantanana, dia miroso hatrany amin’ny fikatsahana ny fahamarinana izahay manoloana ny fifidianana teo.
Minisitra manana dosie maloto Hangotraka amin’izay ny fanenjehana…
Anio no fotoana voatondro fa hifidianan’ireo solombavambahoaka ny solontenany ao anatin’ny Fitsarana Ambony na ny HCJ (Haute Cour de Justice),
Governemanta Ntsay Hotombanana ny asany amin’ity volana ity
Araka ny efa nampahafantarina tamin’ny 25 novambra lasa teo dia amin’ity volana desambra ity no hanombanana ny asan’ny minisitra ao amin’ny departemanta nanendrena azy ny filoham-pirenena.
Voka-pikarohana Azo itarafana ny fandrosoan’ny firenena
Mifamatotra ny fampandrosoana sy ny voka-pikarohana, hoy ny filohan’ny oniversiten’Antananarivo Mamy Ravelomanana nandritra ny famaranana ny hetsika fampirantiana fikarohana,
Andina Ambositra Montsana ny kandidà IRD…
Mitarika vonjimaika amin`ny fifidianana kaominaly ao Andina Ambositra Rakotozandrindrainy Raphael, kandidà tsy miankina. Efa azo daholo ny fitanana an-tsoratra amin`ny biraom-pifidianana miisa 15 ary mitarika vonjimaika amin`ny vato 2.232 na salan`isa 80,03%.
Ady amin’ny aferafera sy kolikoly Miandry didim-panjakana vao miverina ny ENMG
Anisan’ny antony nampiatoana ny fanadinana teo anivon’ny sekoly ambony mampiofana ho mpitsara sy mpiraki-draharaha (ENMG) ny fisiana endrika kolikoly ka nandraisana fepetra fampiatoana ny fanadinana.
Fitazonana am-ponja tsy ara-dalàna Tranga 47 no hita taorian’ny fitsidihan’ny filoham-pirenena
Anisan’ireo olana maro amin’ireo voafonja eto amintsika ny fitazomana am-ponja vonjimaika ary maro no tsy ara-dalàna.
Polisy manao kolikoly Tsy maintsy atao famotorana na be grady aza
Manara-maso ny polisim-pirenena eto Madagasikara ny « Inspection Générale de la Police Nationale » (IGPN).
Jeneraly Njato Andriajanaka Mampitandrina ireo zandary zatra kolikoly
Ny 1 600 amin’ireo mpiadina 10 646 nandritra ny fifaninanana hidirana ho mpianatra zandary andiany voalohany tamin’ny 23 sy 24 novambra lasa teo no horaisina hiatrika ny dingana faharoa.
Lalàn’ny fitantanam-bolam-panjakana Baikon’ny mpamatsy vola hatrany no arahana
Tahaka ny mahazatra, manaraka ny baikon’ireo mpamatsy vola fotsiny ny fandaniana ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana (LFI 2020), hoy ny mpahay toekarena, Hery Ramiarison.
Taom-piotazana 2019 Nitotongana ny vidin’ny lodsia
Tsara ny vokatra lodsia tamin’ity taona 2019 ity, araka ny tatitry ny Fikambanana Tambatra tetsy amin’ny Tobim-piantsonana Gare Makis tetsy Andohatapenaka.
Minisiteran’ny varotra Manara-maso akaiky ireo entana lany daty
Rehefa vanim-potoan’ny fety toy izao dia saika ireo entana miparitaka eny an-tsena sy amoron-dalana avokoa no mitana ny taha ambony
Antanetivory Antsirabe Hisitraka rano fisotro madio ny mponina
Vokatry ny ezaka nataon’ny orinasa Holcim Madagasikara dia hsitraka rano fisotro madio ny mponina any Antanetivory kaominina Tritriva distrikan’Antsirabe.
MAHAJANGA Zazalahy 20 taona, maty notsindronin’ny mpanendaka ny antsy
Mirongatra ihany koa ny tsy fandriampahalemana ao an-drenivohitr’i Boeny.
Haisoratra sy kolotsaina Hisokatra rahampitso ny tranomboky Rajaona Simeon Regis
Hisokatra rahampitso alakamisy 05 desambra, ny tranomboky iombonana Rajaona Siméon Regis eny Antsahabe, eo ambanin’ny kolejy Claire Fontaine.
Libanona - Taolagnaro Lavin’ny mponina marindrano ny fametrahana « fibre optique »
Nanao hetsika ho fanoherana ny fametrahana « fibre optique » ao amin’ny Cité Libanona, ao Taolagnaro ireo fikambanana sy ny mponina any an-toerana.
LOZAM-PIFAMOIVOIZANA Lehilahy iray maty noporetin’ny fiara roa
Nisehoana lozam-pifamoivoizana teo Andohan'i Mandroseza, omaly 3 desambra, tokony ho tamin'ny 8 ora sy folo minitra.